သင်၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင် VPN အသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက် ၇ ခု Gadget သတင်းများ
သင်၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင် VPN အသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက် ၇ ချက်
Rafa Rodríguez Ballesteros | 23/06/2021 11:00 | reviews
ဒီနေ့ငါတို့ပြောကြတယ် အကြီးမားဆုံးသောနိုင်ငံတကာဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့် VPN ဆာဗာများထဲမှတစ်ခု ငါတို့ကိုကမ်းလှမ်းဖို့လာပါတယ် တကယ်လုံခြုံတဲ့သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံ, NordVPN ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်မှအလုပ်ခွင်ခေတ်သစ်သို့မတော်တဆရောက်ရှိလာခြင်းကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ကောင်းသော VPN ၀ န်ဆောင်မှုရှိခြင်းသည်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ အိမ်ကွန်ယက်များမှအထိခိုက်မခံသောဒေတာအသွားအလာများများပြားလာခြင်းကိုလည်းဆိုလိုသည် လုံခြုံရေးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအဆတိုး။ အိမ်မှပင်အလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်သောအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ Y NordVPN သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်လာသည် ပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်။
1 VPN ဝန်ဆောင်မှုကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသနည်း။
2 NordVPN သည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောလုံခြုံရေးကိုပေးသည်
3 အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ server ကွန်ယက်တစ်ခု
4 NordVPN သည်အမြန်နှုန်းနှင့်လုံခြုံမှုကိုဆိုလိုသည်
5 NordVPN ဝန်ဆောင်မှုဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။
သင့်ကိုငါပေးမယ် VPN ကိုအသုံးပြုရသည့်အကြောင်းရင်း ၇ ချက် အလုပ်မှာသင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအတွက်သို့မဟုတ်သင့်အိမ်ကွန်ယက်အတွက်ဖြစ်သည်။ လုံခြုံစိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းနှင့်၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားလုံခြုံရေးတိုက်ခိုက်မှုများ (သို့) ယိုစိမ့်ခြင်းများမှကာကွယ်နိုင်ရန်ကွာခြားမှုသည်ယနေ့တွင်ခြားနားစေသည်။
ဘေးကင်းရေး: သံသယမရှိဘဲဖြစ်ပါတယ် မည်သည့်အင်တာနက်အသုံးပြုသူမဆို VPN ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများငှားရမ်းရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရနိုင်သည့်အဓိကအကြောင်းရင်း။ သင်အလုပ်လုပ်သောအချက်အလက်များ၏ထိခိုက်လွယ်မှု (သို့) လုံခြုံစွာချိုးဖောက်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်ရိုးရိုးလေးအချက်အလက်များကြောင့်၎င်းဝန်ဆောင်မှုများသည် ပိုမို၍ တန်ဖိုးရှိစေသည်။
သီးသန့်လုံခြုံရေးဖြေ - ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားရဲ့သီးသန့်တည်ရှိမှု လုံခြုံရေးနှင့်အတူလက်၌။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်၊ ၎င်း၏သုံးစွဲသူများနှင့်အသုံးပြုသူများ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုပြောနိုင်သည် ဒေတာ ရွေ့လျားနေတဲ့ အများဆုံးအာမခံချက်နှင့်အတူကုသရမည်ဖြစ်သည် တတိယပါတီများမှဆန့်ကျင် privacy ကို။
အမြန်နှုန်း: ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသော VPN server ကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ မြင့်မားသောလုံခြုံရေးအဆင့်သည်ဤတစ်ခုတည်းသောအရေးကြီးသောအရာမဖြစ်သင့်ပါ။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်ဆာဗာတစ်ခုမှပေးထားသောလုံခြုံရေးသည်၎င်းစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အမြန်နှုန်းနှင့်ကွဲလွဲနေသည်။ လုံခြုံသော်လည်းနှေးကွေးသောဆက်သွယ်မှုသည်ကောင်းသောဆက်သွယ်မှုမဟုတ်ပါ.
ချိတ်ဆက်မှုတည်ငြိမ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်တူသကဲ့သို့ ဆက်သွယ်မှုကိုကမ်းလှမ်းနိုင်စွမ်းသောတည်ငြိမ်မှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ လုံခြုံမှုမြင့်မားသောဆက်သွယ်မှုများထားရှိခြင်းသည်အသုံးမ ၀ င်သော်လည်း၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်ဆောင်မှုပြတ်တောက်ခြင်းများကိုဖြတ်သန်းရမည်။
အထူး VPN ဆာဗာများ ဆက်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုကိုပံ့ပိုးပေးရမည့်အဓိကမဏ္ိုင်တစ်ခုဖြစ်သည် VPN ကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်ပါသည် ဆာဗာကောင်းတစ်ခုအစု။ အပေါ်အားကိုး လိုအပ်ချက်တိုင်းအတွက်မတူညီတဲ့ဆာဗာများ၊ သီးသန့်ဆာဗာများ၊ နှစ်ဆဆာဗာများ၊ RAM ဆာဗာများနှင့် P2P ဆာဗာများပင်လျှင်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသည်၎င်း၏သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်လိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးအချက်အလက်အသွားအလာ: အင်တာနက်ကိုသုံးသောအခါအရေးကြီးသော VPN connection တစ်ခု၏အမြန်နှုန်းသည်အရေးကြီးသည်။ ဒါ့အပြင် အချက်အလက်များကို upload နှင့် download လုပ်ရန်ကွန်ယက်၏စွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ service security နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ချိန်ခွင်လျှာကိုရှာပါ ကောင်းသော Mbps stream သည်အထက်သို့မဟုတ်အောက်သို့နည်းနှစ်မျိုးလုံးကိုတွက်နိုင်သည်။
စျေးနှုန်း: ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးကိုကမ်းလှမ်းသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုရှာဖွေသောအခါစျေးနှုန်းသည်အရေးအကြီးဆုံးအချက်များတွင်မဖြစ်သင့်ဟုကျွန်ုပ်တို့အမြဲပြောပါသည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကိုရှောင်လွှဲလို့မရဘူးငှားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောအခါ၊ ကုမ္ပဏီများအကြားစျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်။ အဘယ်အရာကိုသေချာသည်နှင့်မအောင်မြင်ပါဘူးအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ် ဦး ပေးဆောင်ဝန်ဆောင်မှု၏အမြင့်မှာဘယ်တော့မှဖြစ်လိမ့်မည်။
များစွာသောများအတွက် VPN အတိုကောက်အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးသားဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့်အရာကိုတွေးမိမည့်သုံးစွဲသူများရှိနေသေးသည်။ ဒီဟာကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ် VPN ကို အင်္ဂလိပ်လိုအတိုကောက်ဝေါဟာရကိုတွေ့ရတယ် Virtual Private Network။ တိုတိုပြောရရင်ဒါဟာ ကွန်နက်ရှင် အကြောင်း, အများသုံးကွန်ယက်ကိုကြားခံတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း အင်တာနက်လို ကိုယ်ပိုင်ကွန်ယက်တွင်ကွန်ပျူတာများကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည် လုံခြုံစွာ။
ဈေးကွက်ထဲမှာငါတို့ရှာတွေ့နိုင်သည် လုံခြုံရေး၊ အမြန်နှုန်းကိုကတိပေးသောမရေမတွက်နိုင်သော VPN ၀ န်ဆောင်မှုများ နှင့် solvency ။ ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခမဲ့ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီအမြောက်အများကိုတောင်တွေ့ခဲ့ရပြီ။ ကဏ္ sectors အားလုံးနီးပါးကဲ့သို့ပင်အတွေ့အကြုံသည်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့အား ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုအားယုံကြည်စိတ်ချစေသည်။ သူတို့အမြဲတမ်းကတိပေးသလား။
လိုအပ်ချက်အသစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကမ်းလှမ်းမှုအသစ်တွေအမြဲတမ်းပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ယနေ့ Actualidad Gadget မှ NordVPN မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်၎င်းသည်မည်သည့်အရာကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြနိုင်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည် ပို၍ ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောကမ်းလှမ်းချက်များအကြောင်းကိုလည်းသင့်အားပြောပြပါမည်။ သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက်၏လုံခြုံရေးသည်အရေးကြီးပါက ကွန်ရက်စွမ်းရည်လျော့နည်းသွားတာကိုမတွေ့မချင်းအမြင့်ဆုံးအာမခံချက်ကိုလိုချင်သည်။ NordVPN သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာသာဖြစ်နိုင်သည်.
ဤနေရာတွင်ကလစ် နှိပ်၍ NordVPN ကန့်သတ်ထားသောအချိန်ကမ်းလှမ်းချက်ကို ၇၂% လျှော့စျေးနှင့် ၃ လလက်ဆောင်ဖြင့်တစ်လလျှင်ယူရို ၂.၆၄ သာရှိသည်။
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ server ကွန်ယက်တစ်ခု
၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုသည်ဤကဲ့သို့သောကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များရရှိသောအခါမည်သည့်အခါမှမဖြစ်သင့်ပါ။ အဆုံးသတ်မှာ, အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသည်ဈေးကွက်တွင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကုမ္ပဏီတွင်ရှိသည့်အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည် ကုမ္ပဏီတွေအတူတူကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အတူ။ NordVPN မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုသည်ပြည့်စုံသောကွန်ယက်များ၏ရလဒ်ဖြစ်သည် တည်ငြိမ်ပြီး ၁၀၀% လုံခြုံသောဆက်သွယ်မှုကိုပေးနိုင်သည်။
NordVPN ရှိတယ် ၎င်း၏အသုံးပြုသူများကိုအစေခံဆာဗာများ၏အကောင်းဆုံးစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအကျယ်တ ၀ င့်ဖော်ပြပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ က ယုံကြည်မှုရှိသောဆက်သွယ်မှုသည်သင်၏ပြိုင်ဆိုင်မှု၏ရှေ့တွင်တစ်လှမ်းသာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ algorithm သည်သင်ရောက်ရှိနေသည့်နေရာနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာသင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောဆာဗာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အချည်းနှီးရှိသည်မဟုတ် ဆာဗာပေါင်း ၅၅၀၀ ကျော်သည်ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်.
လုံးဝလုံခြုံစိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုလိုအပ်သောသူများအတွက်အပိုဆောင်းပေးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည် NordVPN ၏အချို့ဆာဗာများသည် RAM သာဖြစ်သည်ဒါကြောင့်သူတို့မှာအချက်အလက်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး။ ၎င်းသည်လုံးဝလုံခြုံသောလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေသည် ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာ၌မဆိုထိရောက်စွာကူညီသည်.
ထိုကဲ့သို့သောပြည့်စုံသောဆာဗာကွန်ယက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည် လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်သီးသန့်သီးသန့်ထားရှိသောဆာဗာများ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရှာ ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသော IP ဆာဗာများ ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်အိုင်ပီလိပ်စာနှင့်အသုံးပြုသူများအတွက်။ ထိုနည်းတူစွာ, NordVPN ထို့အပြင်ရှိပါတယ် နှစ်ဆ VPN ဆာဗာများကွဲပြားသောဆာဗာနှစ်ခု၏စစ်ထုတ်ခြင်းကိုဆက်သွယ်လိုသောအသုံးပြုသူများအတွက်။
ငါတို့သည်လည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသောနိုင်ငံများအတွက်အထူးဆာဗာများ။ TOR အလုပ်လုပ်ရန် VPN ဆာဗာများ၊ P2P ဆာဗာများ အထူးခုံတန်းလျားအကျယ်အပေါ်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ optimized ။ မည်သည့်နိုင်ငံများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုသည်ပေါ် မူတည်၍ ရနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကအတည်ပြုနိုင်ပါတယ် NordVPN မှပေးသောဆက်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြန်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် NordLynx လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားဖြစ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါဝင်သည် WireGuard ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောမူကွဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာကိုအမြဲတမ်းလုံခြုံမှုရှိစေမည့်အချိန်တိုင်းတည်ငြိမ်သောဆက်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံသည်လူတိုင်းမပေးနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။
En ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျာမနီရှိဆာဗာများပေါ်တွင်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည် အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်သောအချက်အလက်များကိုကုန်းမြင့်နှင့်ကုန်းမြင့်နှစ်ခုလုံးကိုရရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၌တည်၏ ယူနိုက်တက်စတိတ်သည်အမြန်နှုန်း 1,300 Mbps ထက်ကျော်လွန်သည် ဒေတာများကိုတင်ခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှစ်ခုစလုံး။ On ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, အဆင်းအမြန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ် ၁၀၀ Mbps အထက်1,100 Mbps ကျော်နှင့် upload မြန်နှုန်း။ ဂျာမန်ဆာဗာများနှစ်ခုလုံး အမြန်နှုန်းသည် 1,100 Mbps ထက်ကျော်လွန်သည်.
ငါတို့သိသည့်အတိုင်းစျေးပေါသော ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကောင်းသောနှင့်အမြဲတမ်းအဓိပ္ပါယ်မတူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်လုံခြုံမှုသည်ရှုပ်ထွေးနေပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းချန်မထားသင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မယုံနိုင်လောက်အောင် VPN အပေးအယူများကိုရှာဖွေပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပျက်သွားသောကတိများနှင့်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့် ထိုကဲ့သို့သောပရီမီယံဝန်ဆောင်မှုတွင်ဤ caliber ၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုတွေ့ရှိရန်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်.
လက်ရှိမြှင့်တင်ရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါတို့ယုံလို့ရတယ် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြန်ဆုံး VPN သည်တစ်လလျှင်ယူရို ၂.၆၄ သာဖြစ်သည်။2နှစ်အစီအစဉ်နှင့်အတူ စုစုပေါင်းချွေတာမှု ၇၂% ဖြင့် ၎င်း၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းအထက်နှင့်လည်း3လက်ဆောင်၏နောက်ထပ် 71,20 လလာပြီ။ ဤပရိုမိုးရှင်း၏အားသာချက်ကိုယူပြီးယူရို ၇၁.၂၀ ကိုစျေးနှုန်းမှာ ၂၅၈.၁၂ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လုံခြုံရေးနှင့်အမြန်နှုန်းကိုပေးနိုင်သောသက်သေပြထားသော VPN ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၊
သင်၏လုံခြုံရေးနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်မထားပါနှင့်။ ဤနေရာတွင်ကလစ် နှိပ်၍ အချိန်ကန့်သတ်ချက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုရယူပါ။ ၇၂% လျှော့စျေး NordVPN နှင့်တစ်လလျှင်ယူရို ၂.၆၄ သာအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » သင်၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင် VPN အသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက် ၇ ချက်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သန့်စင်ရန် Oclean ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဤမယုံနိုင်လောက်သောအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏အားသာချက်ကိုယူပါ
အကြှနျုပျ၏ဖုန်စုပ်စက် G9, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်း